ETU ESI MỤTA MBR MA Ọ BỤ GPT NKEWA NA DISKI, NKE KA MMA - DISK - 2019
Etu esi mụta MBR ma ọ bụ GPT nkewa na diski, nke ka mma
Ndị ọrụ ole na ole dị ugbu a ezutewo njehie ndị metụtara na nkewa disk. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ mgbe mgbe ị na-etinye Windows, njehie gosipụtara, dị ka: "Ịwụnye Windows na kuki a agaghị ekwe omume. Nhọrọ ahuru nwere ụdị nke GPT.".
Ọfọn, ma ọ bụ ajụjụ banyere MBR ma ọ bụ GPT na-egosi mgbe ụfọdụ ndị ọrụ zụrụ disk nke karịrị TB 2 (nke bụ, karịa 2000 GB).
N'isiokwu a, m chọrọ imetụ aka na isiokwu ndị metụtara isiokwu a. Ya mere, ka anyi bido ...
MBR, GPT - gịnị ka ọ bụ na ihe kacha mma ya
Ma eleghị anya, nke a bụ ajụjụ mbụ ndị ọkachamara na-ebu ụzọ hụ n'oge a. M ga-agbalị ịkọwa ya n'okwu ndị dị mfe (ụfọdụ okwu ga-adị mfe).
Tupu enwere disk maka ọrụ, a ga-ekewa ya na ngalaba. Ị nwere ike ịchekwa ozi banyere akụkụ disk (data banyere mmalite na njedebe nke partitions, nke nkebi nwere mpaghara nke diski, nke nkewa bụ akụkụ nke isi ma ọ bụ ihe a na-ahụ maka ya) na ụzọ dị iche iche:
-MBR: nna ukwu buut ndekọ;
-DỤTỤ: tebụl na-enye ntụziaka.
MBR pụtara ogologo oge gara aga, na 80 nke narị afọ gara aga. Mkpuchi oke na ndị nwe diski buru ibu nwere ike ịchọta na MBR na-arụ ọrụ na diski na-erughị 2 TB n'ogo (ọ bụ ezie na, n'ọnọdụ ụfọdụ, nnukwu disks nwere ike iji).
E nwere otu nkọwa ọzọ: MBR na-akwado naanị mpaghara 4 (ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ a kariri!).
GPT bụ ọkwa ọhụrụ dị ọhụrụ ma enweghị oke, dịka MBR: disks nwere ike ịdị ukwuu karịa 2 TB (na na nso nso nsogbu a enweghi ike izute onye ọbụla). Tụkwasị na nke ahụ, GPT na-enye gị ohere ịmepụta ọnụọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe (n'ọnọdụ a, sistemụ arụmọrụ gị ga-eweta njedebe).
N'uche m, GPT nwere otu uru a na-apụghị ịgbagha agbagha: ọ bụrụ na MBR ahụ mebiri emebi, mgbe ahụ, njehie ga-eme ma os agaghị arụ ọrụ (ebe MBR na-echekwa data naanị n'otu ebe). GPT na-echekwa ọtụtụ data nke data, yabụ ọ bụrụ na otu n'ime ha mebiri emebi, ọ ga-eweghachite data site na ebe ọzọ.
O kwesịkwara icheta na GPT na-arụkọ ọrụ na UEFI (nke na-edochi BIOS), na n'ihi nke a, o nwere ọsọ dị elu nke nbudata, na-akwado ikpuchi bube, diskipted disks, wdg.
Ụzọ dị mfe iji mụta akara na diski (MBR ma ọ bụ GPT) - site na nchịkọta nhọrọ nchịkwa
Mbụ ị ga-emepe ogwe njikwa Windows ma gaa na-esote ụzọ: Ogwe njikwa / System na Nche / Nchịkwa (nseta ihuenyo gosiri n'okpuru).
Ọzọ ịkwesịrị imeghe njikọ "Njikwa Kọmputa".
Mgbe nke ahụ gasịrị, na menu aka ekpe, mepee akụkụ "Disk Management", na ndepụta nke disks na nri, họrọ diski chọrọ ma gaa na ya Njirimara (lee akụ uhie na nseta ihuenyo n'okpuru).
Ọzọkwa na mpaghara "Tom", na-abụghị akara "Nkebi nke ụdị" - ị ga-ahụ ihe na-egosipụta akara gị. Ihe nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi diski na MBR.
Ihe nchoputa "volumes" - MBR.
N'okpuru ebe a bụ nseta ihuenyo nke otú GPT markup anya.
Ihe atụ nke tab "olu" bụ GPT.
Ịchọpụta nbibi diski site na akara iwu
Ngwa ngwa, ị nwere ike ikpebi nhazi disk site na iji akara iwu. M ga-enyocha nzọụkwụ esi eme nke a.
1. Mbụ pịa igodo ahụ. Nweta + R imeghe taabụ "Run" (ma ọ bụ site na START menu ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows 7). Na windo ime - dee wepụ ma pịa tinye.
Na-esote, n'ime iwu iwu tinye iwu ahụ ndepụta disk ma pịa tinye. Ị ga-ahụ ndepụta nke ọ bụla draịva jikọọ na usoro. Rịba ama n'etiti ndepụta dị na kọlụm ikpeazụ nke GPT: ọ bụrụ na e nwere "*" banye na kọlụm a megide diski ụfọdụ, nke a pụtara na diski nwere GPT markup.
N'ezie, nke ahụ dum. Ọtụtụ ndị ọrụ, site n'ụzọ, ka na-arụ ụka banyere nke ka mma: MBR ma ọ bụ GPT? Ha na-enye ihe dịgasị iche iche maka mma nke nhọrọ. N'uche m, ọ bụrụ na ugbu a, ajụjụ a bụ maka onye ọzọ, mgbe afọ ole na ole ọtụtụ nhọrọ ga-emesị kpọọ isiala nye GPT (ma eleghị anya ihe ọhụrụ ga-apụta ...).
Ezigbo onye ọ bụla!